Madaxweynaha Venezuela oo 72 saacadood u qabtay diblumaasiyiinta Mareykanka in ay uga baxaan Karakaas - Halbeeg News
Madaxweynaha Venezuela oo 72 saacadood u qabtay diblumaasiyiinta Mareykanka in ay uga baxaan Karakaas
KARAKAAS (HALBEEG)- Madaxweynaha dalka Venezuela Nichols Madur ayaa arbacadii wajahay caqabadii ugu weyneyd ee xukunkiisa soo wajahda tan iyo markii uu xukunka la wareegay 2013-kii iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Venezuela uu ku dhawaaqay Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee sharciga ah ee ay leedahay Venezuela.
Madax uu kamid yahay madaxweyne Trump ayaa durbadiiba hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday Madaxweynaha rasmiga ah ee Venezuela.
Madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa falkan uga jawaabay in uu xiriirkii diblumaasiyeed iyo midkii siyaasadeedba u jaray dalka Mareykanka isagoo 72 saacadood u qabtay in ay dalka uga baxaan diblumaasiyiinta Mareykanka ah ee ku sugan Venezuela.Talaabadan ayaa dhalisay caqabad siyaasadeed oo aad weyn, hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ay Washington u aqoonsatay madaxweynaha ku meel gaarka ah Venezuela ayaa diblumaasiyiinta Mareykanka ugu baaqay in ay dalka sii joogaan.
Bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Bombiyo ayuu ku sheegay in Mareykanka uusan u hogaansami doonin amarka kasoo yeeray madaxweyne Maduro waxa uuna ciidamada ammaanka Venezuela ugu baaqay in ay ilaaliyaan ammaanka diblumaasiyiinta Mareykanka ah ee ku sugan Venezuela.
“Dowladda Mareykanka uma aqoonsana Maduro Madaxweynaha dowladda Venezuela” ayaa lagu yiri warbixintan laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaana la sii raaciyay “Mareykanka Madaxweynihii hore Nicholas Maduro uma aqoonsana inuu heysto awood sharciyeed oo uu ku jaro xiriir diblumaasiyeed ama uu ku dhawaaqo in aan diblumaasiyiinteena laga rabin dalkaasi”.
Mar sii horeysay ayaa madaxweyne Trump la weydiiyay in ay isticmaali doonaan awood militari waxa uuna yiri “Wax mudnaan ah ma siinayno awood milatari balse wadooyin kala duwan ayaa inoo furan”
Dhacdooyinkan sida deg degga ah uga dhacay Venezuela ayaa aad uga yaabiyay dadka indha-indheeya arrimaha siyaasadda.
Madaxii xafiiska isgaarsiinta dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo xilkii laga qaaday